५ पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य-बिस्थापन र आफ्नो सत्तारोहण
५ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले देशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन् । यतिबेला भूतपूर्वहरुको क्लव सक्रिय भएको बेला छ । नेपाल प्रहरकिा पूर्व महानिरीक्षकहरुको समूह, पूर्व अख्यिारका आयुक्तहरु हुँदै प्रधानन्यायधीश, निर्वाचन आयुक्तहरु हुँदै पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सम्मको गतिविधि देखिएकै हो । एमसीसी प्रकरणमा तीन पूर्व प्रधानसेनापतिले संयुक्त वक्तव्य निकालेको पनि पढियो । संसद विघटनबारे वर्तमान सभामुखले पूर्वसभामुखहरुसँग छलफल गरेर त्यसको पनि समूह भएको छनक देखाइसके । जेहोस्, यहाँनेर भूतपूर्वहरुको सक्रियताका सन्दर्भमा ५ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले मुलुकमा विदेशी चलखेल बढ्न दिन नहुने वक्तव्य निकालेका छन् । आफै विदेशी प्रभावमा पर्नेहरु हुन् यी पाँचै जना ।
नागरिकको अवस्था के छ ? नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्य, रोग र भोकको निदान कसरी गर्ने ? कुनै पनि भूतपूर्वहरुले चिन्ता गरेका छैनन् । सबैको तारो सत्ता हो र ओलीलाई पदमुक्त गराउने एकसूत्रीय लक्ष्य देखिन्छ । यिनको चासोमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको साथ र सहयोगप्रति आक्रोश पनि देखिन्छ । यिनको वक्तव्यमा बिगत साँढे ३ वर्षदेखि ओलीले सत्तानन्द लिएको दुःख प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । संविधान र जनताको दुहाइ दिने यिनको वक्तव्यको निथार भनेकै ओलीको बिस्थापन र आफ्नो सत्तारोहण हो ।
वक्तव्यमा तर्क छ– यो काम चलाउ सरकार हो, पूर्ण बजेट किन ल्यायो, मन्त्रिमण्डल किन बिस्तार ग¥यो, दूरगामी असर पार्ने निर्णय किन गरिरहेछ ? ओलीको स्वेच्छाचारिता बढ्यो ? सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भए । पहिलोपल्टको संसद बिघटनलाई अदालतले उल्टाइदिएपछि फेरि बिघटन किन गरे ? महान्यायाधिवक्तामार्फत न्यायालयलाई किन धम्क्याइयो ? यस्तो असंवैधानिक सरकारलाई कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि साथ दिनुहुन्न । जानिफकारहरु भन्छन्– यी आशयको वक्तव्य आउनु थप संशयको कुरा हो । खासगरी मुलुकमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानका उपाय र त्यसका लागि आफ्नो रचनात्मक सहयोग रहनेजस्ता प्रतिवद्धता केही छैनन् । मात्र सत्ताका लागि ओलीले पद त्याग गर्नुपर्ने, समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने जस्ता आशय वक्तव्यमा झल्किनुले यिनको चुरीफुरी सत्ताका लागि मात्र हो भन्ने सुस्पष्ट छ ।
त्यसो त यी ५ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भिन्न भिन्न विचारधाराका तर सत्ताका लागि आन्द्रा जोडिएका व्यक्तिहरु हुन् । यसकारण पनि वक्तव्यले जनतालाई चित्त बुझाउन सकेको देखिन्न । पहिला पहिला एकले दोस्रालाई गाली गरेर वक्तव्यवाजी गर्थे, अहिले संयुक्त छ र गालीको तारो ओली बनेका छन् । पटक पटक र विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरुको वक्तव्यले हास्यरसमात्र प्रदान गरेको छ । संयुक्त वक्तव्य निकालिसकेपछि विगतका कमीकमजोरीमा आत्मालोचना गरेर वर्तमान संविधानका त्रुटी पनि औंल्याएर आगामी दिनमा इमानमा चल्ने, नैतिक आचरण कसैले पनि ननाघ्ने भनेर प्रतिवद्धता पनि बताइदिएको भए कति सुृन्दर हुनेथियो । यिनीहरुबाट अब पनि उही ढाँट, छल, भ्रम ?
मर्यादा र निष्पक्षता, दलीय आचारमा रहने कुरा होइन, ओली फाल्ने र आफू सत्तामा जाने कुराभन्दा बढी वक्तव्यमा देश र जनताका लागि केही पनि छैन । पार्टीका कार्यकर्तालाई, अयोग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने अनि मर्यादा र निष्पक्षताको अपेक्षा गर्ने ? भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अनि आफ्ना पक्षमा फैसला खोज्ने ? योभन्दा मजाक अरु के हुन्छ ?
सभामुखकोपद पनि निष्पक्ष र पार्टीभन्दा माथि हुनुपर्ने हो । तर त्यही पद आउन संसदमा भएका राजनीतिक लुछाचुँडीको परिदृश्य देखिएकै हो । किन ? प्रष्ट छ, सभामुखको भूमिकाले सत्ता र विपक्ष दुबैमा ठूलो पार्ने गर्छ । त्यसैले सभामुख, उपसभामुखमा पनि भागबण्डा चलेकै छ । भन्नुपर्दा पार्टीका नेतालाई सर्वोच्च पदहरुमा पु¥याएपछि राष्ट्रसेवा, संविधानको मर्यादा हुन्न, राजनीतिमात्र हुन्छ । लोकतन्त्रमा अलोकप्रियताको कारण नै यही हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई, सभामुखले विपक्षीलाई च्यापेको गुनासो के गर्नु ? संवैधानिक बेञ्चमा समेत आफ्ना निकटलाई राख्नुपर्ने विवादले न्यायप्रणाली धुजा धुजा भएको पनि देखियो । मर्यादा नाघ्ने नेता हुन्, नेतामा आचरण र आचारसंहिता नलाग्दा सबै विकृतिहरु बढ्दै गएका हुन् । जनअपेक्षालाई यो पद्धतिले, जनप्रतिनिधि र सरकारले संवोधन गर्न नसकेको पनि यही कारण हो । यहाँ राजनीति छ, निष्पक्षता सकियो । सक्ने यिनै नेताका नैतिकहीन राजनीति हो ।
मुलुकमा विदेशी षडयन्त्र बढ्यो रे ? यसको जिम्मेवार ओलीमात्र होइनन्, जिम्मेवार यी ५ पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन् । यस्तैलाई विश्वास गर्ने र यिनके भर पर्ने हामी जनता पनि हौं । कारण अनेक छन् र निराकरण सबै राजनीतिक पक्षलाई उचित स्थान दिएर राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिमा छ ।
यस्तो राजनीतिका लागि प्रयास गरौं भन्ने आह्वान किन यी ५ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले गर्न सकेनन् ? निषेध र विभेदले अब देश अघि बढ्न सक्दैन, देश समस्याबाट संकटतिर उन्मुख छ । सबै मिल्ने वातावरण खोजौं ।